Uxanduva kweNtlalontle-Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.
Amashishini kunye nabasebenzi
Inkampani ihlala ihambelana nombono ojolise ebantwini, ikhusela amalungelo kunye nomdla wabasebenzi beshishini, ibonelela ngendawo yokuhlala simahla kunye neebusuku zasebusuku zabasebenzi bemveliso, ukumisela ibhokisi yemiyalezo yengcebiso, ukumamela ilizwi labasebenzi, kunye nokuzama ukwenza iqonga Ukukhula okuqhelekileyo kwamashishini kunye nabasebenzi.
Amashishini, abathengisi kunye nabathengi
Ngokubhekisele kubanikezeli kunye nabathengi, ukusebenzisana kwayo ixesha elide kunye nenkampani kuye kwagcinwa ngexesha lokunika ingxelo. Ukunamathela kumxholo wokunyaniseka nokuthembeka, inkampani ifuna uphuhliso kunye nabanikezeli kunye nabathengi, kwaye intsebenziswano efanelekileyo iye yomelezwa ngakumbi.
Ishishini kunye noluntu
Njengenkampani yoluntu engadweliswanga, inkampani ihlawula kakhulu uxanduva lwayo ekuhlaleni njengenkampani yoluntu engadweliswanga ngelixa izama ukubuyela kwezoqoqosho kubanini zabelo. Ukuze kuphunyezwe ngokunzulu isicwangciso-qhinga sesizwe sokuphuhliswa kwendlala kunye nomoya, inkampani yenze iinzame ezisebenzayo zokudlala indima yeenkampani zikarhulumente ezingadweliswanga ekusebenziseni iqhinga lesizwe lokulwa indlala. Ngexesha lokunika ingxelo, inkampani iphumeze izicwangciso zokuphelisa intlupheko ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye kule minyaka idlulileyo, inikezele ngamashumi amawaka e-yuan ukuxhasa ulwakhiwo lweendawo ezihlwempuzekileyo.